Kedu ka nwanyị si ezo na ọ masịrị gị | Ndị nwoke mara mma
Alicia tomero | 09/06/2022 10:00 | Di na Nwunye na Mmekọahụ
O meela gị na nwa agbọghọ ahụ masịrị gị, ọ hụkwara gị n’anya, ma ọ na-ezochi ya? Anyị amaghị n'ezie ime mmadụ, mana maka ihe ịrịba ama dị iche iche na ihe kpatara ya ị gaghị ezobe na ọ na-amasị mmadụ ma na-akpa àgwà dị iche iche.
Nwanyị nwere mmasị na nwoke nwere ike ma ọ bụ ghara izochi ọnọdụ dị otú ahụ, ma ọ bụrụ na agụụ ya siri ike o nwedịrị ike kpọnwuo ya. Ọbụlagodi na ihe akaebe niile ma ọ bụ akara ole na ole, ọ bụrụ na ịnweghị ike ijide n'aka na nwa agbọghọ ahụ masịrị gị ma ọ bụ ihe kpatara na ọ naghị ekwu ihe ọ bụla, ikekwe. ekwesịrị ime ihe gbasara ya. Chọpụta ihe na-akpata nwa agbọghọ na-ezochi agụụ ya.
1 E nwere ihe ịrịba ama na-egosi na ọ masịrị gị
2 Ihe kpatara na nwanyị anaghị anwa anwa ime nzọụkwụ mbụ
3 Kedu otu nwanyị si ezobe na ọ hụrụ gị n'anya?
E nwere ihe ịrịba ama na-egosi na ọ masịrị gị
Nke isii Sense nke nwere ike iburu anyị mgbe niile na-agwa anyị na e nwere ihe ọzọ. Nwanyị ahụ nwere ike iwepụta akara ngosi nke nwere ike ikpughe ihe doro anya, ọ bụ na ha enweghị mgbagha? Mgbe ụfọdụ, ha anaghị egosipụta nke ọma, n'ihi na ịchọrọ izobe ma ọ bụ n'ihi na ị nwere ihe mere ị ga-eji kwado ya.
Ihe kpatara na nwanyị anaghị anwa anwa ime nzọụkwụ mbụ
Ihe mgbaàmà ọ nwere ike ibunye, n'enweghị obi abụọ ọ bụla, enweghị ike izo ya ezo. Otú ọ dị, ị ga-ekwere na omume ya abụghị ihe ijuanya ma ọlị na ndị a obere nuances na-eme ka ị hụ na ọ hụrụ gị n'anya n'ezie. Nwanyị ga-agbalị ka o kwere mee iji zoo na ọ hụrụ nwoke n'anya, ọ gwụla ma ọ na-agbalị izochi ihe doro anya n'ihi ihe ụfọdụ.
Ihere Ọ bụ otu n'ime ihe ndị doro anya. N'ime nkọwa a, ọ dị mkpa iji nyochaa enweghị nchebe ha, ebe ọ bụ na eziokwu a na-achị n'ọtụtụ mkpebi dị mkpa. Enweghị ngwaọrụ zuru oke iji chee eziokwu a ihu ma ọ bụ laghachi azụ karịrị ihe kpatara ya.
Nwanyị ahụ nwere ike ọ gaghị adị ka onye ihere, kama nke ahụ ndị mpako, ndị mpako na ndị na-atụkwasị obi. Ma ọ bụ na, n'agbanyeghị na ọ na-ele anya n'ụzọ zuru ezu nke ịbụ onye nwere nchebe zuru oke, ikekwe ọ nweghị nkà niile iji chee ihe omume dị otú a ihu.
Àgwà ọzọ na-eme ka ndị mmadụ chọọ, ma ha enweghị ike, bụ n'ihi na ha nwere a egwu dị egwu nke ịjụ. Ha na-enwe nrụgide dị ukwuu maka ịchọ ime ihe nile nke ọma ma, ha kwenyere na n'ikpeazụ omume ha nwere ike ịghọgbu ha.
ọgụgụ isi mmetụta uche Ọ nwekwara ike ịme ahụmahụ ọjọọ, yana enweghị nkà mmekọrịta ọha na eze zuru oke iji nwee ike igosipụta mmetụta ha. N'okwu ndị a, nwanyị ahụ nwere ike ịsụ ngọngọ n'ụfọdụ n'ime àgwà ndị a dị n'elu na, n'enweghị mkpebi ọ bụla nwere ike ime, gbanarị ọnọdụ ahụ.
Kedu otu nwoke si ezobe na ya hụrụ nwanyị n'anya?
Nwanyị nwere obi ike na obi ike ga-eleba anya na nwa nwoke masịrị ya na agaghị elepụ anya. Otú ọ dị, mgbe o lepụrụ anya o nwere ike ịpụta na o nweghị mmasị ma ọ bụ na ọ na-akpagharị. Enwere ọtụtụ ihe mere ị ga-eji wepụ ya n'akụkụ, ọ pụkwara ịgụnye ihere. Ọ bụrụ na ọ lekwasịrị gị anya ọzọ mgbe i mejọrọ ya, nke ahụ bụ n'ihi na o nwere mmasị n'ebe ị nọ.
Enwere ọtụtụ akara ndị a ga-amụ iji chọpụta ma nwanyị ahụ nwere mmasị, ọ bụrụgodị na ọ dị ka ọ dịghị. Nwanyị nwere ike gbanwee omume ya n'ihi na ọ dị onye ọ nwere mmasị na ya, Otú ọ dị, ọ na-enwe mmasị mgbe niile. Ihe kpatara o jiri zoo, anyị enyochalarị ha na mbụ, mana nkọwa zuru ezu n'okpuru ebe a:
Ọchịchọ. Ọ bụrụ na ọ na-enwe ọmarịcha ịmụmụ ọnụ ọchị n'ebe ị nọ, dị iche, na-adọrọ mmasị karị, na-emejọ ma ọ bụ ọbụna ụjọ, ọ bụ ihe ngosi doro anya na ọ nwere mmasị n'ebe ị nọ.
Leba anya nke ọma na ihe oyiyi gị. Ọ bụrụ na ị maara nwanyị ahụ ogologo oge, ị nwere ike iche na ejiji ya agbanweela, ị na-eche na ọ na-ejiziwanye ejiji ugbu a. A ga-elebara uwe gị na ntutu isi gị anya nke ukwuu ma ị ga-eji ezigbo senti.
na-agakarị otu ebe ma ọ bụ na-anọkarị nso na mpaghara mmekọrịta gị. Ọ bụghị ihe mberede mgbe ọ na-eme ọtụtụ ugboro, na nke ahụ bụ n'ihi na ọ na-enwe mmasị na gị mmegharị na ga-mgbe ọ bụla kpasuo ndị na-ezute.
Otú i si ekwu okwu ga-apụtakwa ma ọ bụrụ na ọ masịrị gị. Obiọma bụ ihe dị mkpa Ọ ga na-aṅa ntị mgbe niile n'ihe niile ị na-agwa ya na ọbụna mgbe ị na-ekwu okwu, leba anya otú o chefubeghị ọtụtụ nkọwa na mkparịta ụka gị.
Nyochaa akara ahụ gị. Ọ bụrụ na ị chọghị ka e kpughee ya, ikekwe ahụ gị ga-enye nkọwa ụfọdụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ahụ ya na ihu ya na-atụ aka n'ebe ị nọ, nke ahụ bụ n'ihi na ọ nwere mmasị. Ọ bụrụ na ị na-emetụ ntutu gị aka mgbe niile ma ọ bụ na-edozi uwe gị, ndị a bụkwa ihe ịrịba ama.
Ọ bụrụ na ị na-ekwu leba anya ọbụrụ na o legidere gị anya ma ọ bụ lelee akụkụ ndị ọzọ nke ihu, dị ka egbugbere ọnụ. Ọ bụrụ na ị nwere ụkwụ gị ntakịrị iche na ị na-agbanyekwa na nkwonkwo ụkwụ gị.
Nyere ihe ngosi, ihe ịrịba ama, ihe akaebe ma ọ bụ ngbanwe na-adịghị abanye na akaụntụ, ọ bụrụ na-amasị nwanyị ahụ ma ọ dịghị onye na-ebute ụzọ, mgbe ahụ ị ga-eme obere nzọụkwụ. Mgbe obi abụọ, ọ dịghị ihe dị mma karịa Gbalịa iwebata onwe gị ma ọ bụ mee oge atọrọ. Ọ bụrụ na oge agafeela ma ị nweghị ike ichere ogologo oge, ị ga-eme mkpebi ma jiri nkwanye ùgwù gbalịa chọpụta ma nwanyị ahụ nwere ihe ọ ga-ezo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Mụ nwoke Stylish » Dabara » Di na Nwunye na Mmekọahụ » Kedu otu nwanyị si ezobe na ọ hụrụ gị n'anya?
Anya ịhụnanya: otu esi amata ha